ह!त्या कि आ,त्मह,त्या ! एकै घरमा ३ जना मृ,त फेला,अनुसन्धान हुदै -
ह!त्या कि आ,त्मह,त्या ! एकै घरमा ३ जना मृ,त फेला,अनुसन्धान हुदै
काठमाडौं । गोरखा बारपाक सुलीकोट गाउँपालिमा एकै घरका तीनजना मृ,त अवस्थामा भेटिएका छन्। बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–१ को धामीटोलको एक घरका तीनजना मंगलबार बिहान मृ,त अवस्थामा भेटिएका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय जौबारीका प्रहरी निरीक्षक ईश्वर लौडारीका अनुसार एकजना वृद्ध, उनकी बुहारी र अर्की एक बालिका ९छोरीकी छोरी० मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। ८४ वर्षीय टिलबहादुर गुरुङ, उनकी बुहारी २२ वर्षीया आईतकुमारी गुरुङ र नातिनी १३ वर्षीया उषा गुरुङ आज बिहान मृ,त भेटिएको गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले बताए ।
बिहान ढिलासम्म घरको ढोका नखुलेपछि अर्को घरमा बस्दै आएकी बुहारीले ढोका खोलेर हेर्दा तीनैजना मृ,त अवस्थामा भेटिएको स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै लौडारीले बताए। मुखबाट फिज निस्किरहेको अवस्थामा श,व भेटिएकाले कुनै विषक्त खानेकुरा खाएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रहरी निरीक्षक लौडारीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली घट,नास्थलतर्फ गइरहेको छ। प्रहरी घट,नास्थल नपुगेकाले मृत,कको विवरण प्राप्त भएको छैन। ‘हामी घट,नास्थलतर्फ जाँदै छौ’, लौडारीले भने, ‘त्यहाँ पुगेपछि थप विषयमा बोल्न सकिन्छ।’
Previous कोरोना संक्रमित एक जनाको मृ,त्यु,अझै सावधान हुन् जरुरि
Next सैन्य विमान दुर्घ,टना